Kutheni uMxholo oQulunqwe ngumsebenzisi ulawula oPhakamileyo ngeMinyaka yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
Kuyamangalisa ukubona indlela itekhnoloji eguquke ngayo kwixesha elifutshane. Kudala zahamba iintsuku zeNapster, iMySpace, kunye ne-AOL yokudayala ngokulawula intengiso ye-Intanethi.
Namhlanje, amaqonga eendaba ezentlalo alawula ngokugqwesileyo kwindalo yedijithali. Ukusuka ku-Facebook ukuya ku-Instagram ukuya kwi-Pinterest, aba bantu bezentlalo baba yinto ebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Sukujonga ngaphaya kwexesha esilichitha kwimidiya yoluntu mihla le. NgokukaStastista, umntu ophakathi uchitha Imizuzu ye-118 ngemini ukukhangela iinethiwekhi zemithombo yeendaba. Sele iyindlela esiqhakamshelana ngayo, sivakalisa imvakalelo, kwaye sithengise iimveliso kubathengi kwihlabathi liphela.
Masiqwalasele ngakumbi indlela amashishini asebenzisa ngayo imithombo yeendaba zentlalo ukukhulisa uphawu lwayo, ukuguqula izikhangeli ezingena kubathengi abathembekileyo.
I-eCommerce, yeNtlalontle, kunye ne-UGC: Ngonaphakade
Umhlaba we-eCommerce ukhawuleze waba yenye yezona ndawo zikhuphisana kakhulu ukuze amashishini aphumelele kuwo. Ngeenkampani ezikwikhompyutha nakwiintanethi ezifuna ukwenza imali nokuxhasa amandla eendaba ezentlalo, ukwahlula uphawu lwakho kukhuphiswano kuye kwaba nzima kunakuqala.
Ke bayenza njani abathengisi be-eCommerce abaphumeleleyo? Impendulo ngumxholo owenziwe ngumsebenzisi.
Kule nqaku, siza kungena nzulu ngokuba kutheni umxholo oveliswe ngumsebenzisi sesona sixhobo sibalulekileyo onokuthi usisebenzise kwiminyaka yeendaba zentlalo. Siza kuchukumisa iqonga ngalinye losasazo loluntu, sigubungela iingcebiso kunye neendlela ezilungileyo zokusebenzisa i-UGC kwaye sincede ishishini lakho lilawule kwintlalo.
Bathi umxholo ungukumkani. Ewe, siyakholelwa ukuba umxholo owenziwe ngumsebenzisi ngoku ngukumkani. Yiza ufumane ukuba kutheni:
Guqula iphepha lakho le-Instagram libe yindawo emangazekayo yokuthenga
Siphila kwihlabathi apho ingqalelo yethu inqongophele. Kwimithombo yeendaba kwezentlalo, abasebenzisi banomdla wokuskena kunye nokuskrola kunokufunda iziqwengana zesicatshulwa. Kungenxa yoko le nto i-Instagram iye yangamandla okubalelwa, kuveza indawo enkulu yabasebenzisi abanyanisekileyo ngeqonga labo leefoto.
Idatha ixhasa impumelelo yabo. Ngapha koko, kuwo onke amajelo entlalontle, ukugcwala kwiivenkile ze-eCommerce ezisuka kwi-Instagram zihlala ixesha elide kwisithuba semizuzwana eyi-192.4. Itshathi engezantsi ibonisa indlela i-Instagram egcina ngayo ukhuphiswano:
Ke uwasebenzisa njani amandla e-Instagram kwaye usebenzise iqonga ukuqala ukuthengisa? Umxholo owenziwe ngumsebenzisi, ewe.
Abantu bathembela ngaphakathi kwiifoto kunye nomxholo ovela kubathengi bokwenyani, abathembekileyo ngaphezu kwabathengisi ngokwabo. Ivumela abathengi ukuba babone ukuba iimveliso ozithengisayo ziyonwatyelwa ngabathengi kwihlabathi liphela.
Zama ukudibanisa iifoto ezenziwe ngumsebenzisi kwi-Instagram kunye nenqaku elitsha elinomdla elisandula ukukhutshwa nguYotpo ekuthiwa I-Instagram eneevenkile. I-Instagram eneevenkile Ivumela ii-brand ze-eCommerce ukuba ziguqule iigalari zazo ze-Instagram zithengwe. Inkqubo ilula kakhulu.
Indawo ehambelana nayo edityaniswe kwi-bio yakho ye-Instagram, uyilo olunokuthengwa nge-Instagram ngumfanekiso wesipili wephepha lakho loqobo le-Instagram. Oku kuqinisekisa ukuba abathengi bafumana amava ngokulula okuskrola abalindeleyo, kodwa ngokongezwa kokwenza umxholo abawubonayo uthenge. Ukwenza lo mxholo babone ukuveliswa ngumsebenzisi sisixhobo esinamandla ngokumangalisayo.
Umzekelo omkhulu wentengiso ye-eCommerce usebenzisa ngokupheleleyo ukudibanisa i-UGC kunye ne-Instagram ethengwayo IiHamboards. Umthengisi odumileyo weLandsurfing, bawaqonda amandla okuguqula iifoto ezenziwe ngabasebenzisi kwi-Instagram zenze amakhonkco athengwayo ngonqakrazo lweqhosha. Njengoko ubona ngezantsi, iziphumo zicocekile, Ivenkile ephefumlelweyo yabathengi ejongeka ngathi umsebenzisi akashiyanga i-Instagram:
Landela ukukhokela kwe-Hamboard, kunye ne-Instagram eziThengisiweyo ze-Instagram kunye nomxholo owenziwe ngumsebenzisi wempumelelo ye-eCommerce kwi-Instagram.
Sebenzisa uphononongo lwe-UGC ukwenza ukuba iintengiso zakho kuFacebook zivelele kwisihlwele
Sonke siyalazi ibali likaFacebook kubume benkcubeko. Ukusuka kwimbono kwigumbi lokulala e-Harvard ukuya kwishishini leebhiliyoni ezininzi, i-Facebook yeyona nto iphambili kwimpumelelo yemithombo yeendaba kwezentlalo kwinkulungwane yama-21. Iqonga liyaqhubeka nokuvela, lisoloko liguqula indlela esisebenzisana ngayo nokunxibelelana nabanye.
Ngalo naliphi na ishishini, akunakubakho ndawo ibhetele yokuthengisa iimveliso zakho kunakuFacebook. Ayaneli nje ukwenza inkqubo ibe lula ngangokunokwenzeka, kodwa ukufikelela okunokubakho kweentengiso zakho kubathengi abanokubakho akunakuphela.
Indlela entle yokwenza ukuba iintengiso zakho zitsale abasebenzisi beFacebook zisebenzisa umxholo owenziwe ngumsebenzisi ovela kubathengi bangaphambili. Ngokubonisa nje uphononongo oluqinisekileyo kumthengi owonwabileyo kwintengiso yakho ye-Facebook, I-ROI yale mveliso inyuka kakhulu.
thabatha IMYJS, ivenkile yobucwebe kwi-intanethi, njengomzekelo. Inkampani ephumeleleyo yobucwebe kwizizukulwana ezingaphezu kwe-3, bakhawuleze bawaqonda amandla eendaba ezentlalo kunye nesidingo sobukho kwi-Intanethi.
Nge-Facebook ekubeni sisininzi semidiya yoluntu, i-MYJS yaqonda ukuba intengiso ku-Facebook yayiyimfuneko. Xa baqala ukusebenzisa iYotpo kunye ne-UGC kwi Iintengiso ze-Facebook ngokusebenzisa uphononongo oluvela kubathengi bangaphambili, iimetrikhi zabo ziphuculwe kakhulu. I-UGC ikhokelele ekunciphiseni kwexabiso lokufumana izinto nge-80%, ngelixa kwangaxeshanye kudala i-200% yokunyuka kwinqanaba lokucofa.
Indawo yentengiso kuFacebook igcwele ngamakhulu amawaka amashishini. Sebenzisa i-UGC ngaphakathi kweentengiso zakho zikaFacebook kunokuba yimpendulo yokuba eyakho ivele.
I-Pinterest: Isixhobo sakho semithombo yeendaba eyimfihlo enqwenela umxholo owenziwe ngumsebenzisi
Ihlala ihoywa xa ikhankanya amaqonga amakhulu eendaba ezentlalo, iPinterest ibhabha phantsi kwe-radar kwiimpawu ezininzi ezithengisa kwi-Intanethi. Le mbono iphosakeleyo yokuba iPinterest ayibalulekanga njengoko ezinye zibekwe esweni yiyo nayiphi na inkampani ewela phantsi kwalo mgaqo wokucinga. IPinterest yenye yeqonga leendaba zosasazo olukhula ngokukhawuleza kunye nokuzibandakanya okumangalisayo, kunomdla wokuthenga isiseko somsebenzisi.
I-UGC idlala ngokwahlukileyo, kodwa ngokulinganayo ibalulekile kwindima kwiPinterest. Ngamashishini asebenzisa "iibhodi" kunye "nezikhonkwane", iPinterest liqonga elifanelekileyo lokuvumela abathengi ukuba babonakalise umbulelo ngokuphelisa umxholo owenziwe ngumsebenzisi kwezi bhodi.
Olunye lweemveliso zeCommerce eziphumeleleyo, iWarby Parker, isebenzisa i-UGC kwiPinterest ngokugqibeleleyo. Benze ibhodi enesihloko Abahlobo Bethu kwiZakhelo zethu, apho babonisa abachaphazeli kwi-Intanethi abagqoke iiglasi zabo ngeendlela ezahlukeneyo. Ngabalandeli abangaphezu kwama-35 amawaka kule bhodi iyodwa, uWarby Parker waqonda kwaye wafaka imali kwithuba lokusebenzisa umxholo owenziwe ngumsebenzisi njengenxalenye yabo Isicwangciso sentengiso sePinterest.
Siphila kwihlabathi elilawulwa yimidiya yoluntu
Sifumana ulwazi lwethu kukutya kweendaba endaweni yamaphephandaba. Sijonga ulwazi kwiinjini yokukhangela endaweni yeelayibrari; yonke into ngoku iyafumaneka kwiingcebiso zeminwe yethu yedijithali. Nokuba le nto intle okanye imbi kuluntu ilungele ingxoxo-mpikiswano nezimvo zoluntu. Yintoni engekhoyo kwingxoxo-mpikiswano, nangona kunjalo, ukubaluleka kwe-UGC ngaphakathi kwendalo yemidiya yoluntu. Umxholo owenziwe ngumsebenzisi wenza ukuba kuthenjwe kwaye kuthembeke phakathi kwenkampani kunye nomthengi, ethi yona kumajelo asekuhlaleni ibe yinto enqabileyo ukuyifeza. Nokuba yi-Facebook, i-Instagram, okanye iPinterest, umxholo oveliswe ngumsebenzisi kunye nemithombo yeendaba zentlalo ziya kubotshwa kunye iminyaka kunye namashumi eminyaka ezayo.
tags: UkuThengiswa kweMpahlainstagramTwilleyIvenkile ye-instagramugcUmxholo oveliswe ngumsebenzisiYotpo
Ngaba i-Snapchat ibalulekile kubathengisi?
I-Vungle: Yenza imali kwi-App yakho yeSelfowuni ngeeVidiyo ze-In-App